Fanadiovana Faobe Ambondrona
Nisy ny fanadiovana faobe nataon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra sy ny mpivarotra teny Ambondrona ambony, izy ity dia hetsika natao ary mbola hatao isam-bolana. Nofafana tamin’izany ny anatiny sy ivelan’ny tsena, nosokirina ny tatatra ary
Fanadiovana faobe amin’ny alina
auteur octobra 5, 2016 Commentaires fermés
Nanao fanadiovana ny kaominina Antananarivo omaly alina nanomboka tamin’ny 8ora ka hatramin’ny 10 ora . Ny natao tamin’izany dia nanala ireo 4 mi na ireo tsy manan-kialofana miparitaka eran’ny Tanàna sy nanala ireo mpivarotra
auteur octobra 4, 2016 Commentaires fermés
Fanadiovana ny farihin’i Behoririka
auteur septambra 28, 2016 Commentaires fermés
Hatomboka tsy ho ela ny fanadiovana ny farihin’i Behoririka ho fisorohana ny fiakaran’ny rano, mialoha ny fotoam-pahavaratra. Noraisina ny fepetra hoy ny tomponandraikitra avy ao amin’ny Boriborintany Fahatelo satria asa fanao isan-taona izany, sady
Fanadiovana Boriborintany Fahatelo sy Fahadimy
auteur septambra 26, 2016 Commentaires fermés
Mitohy hatrany ny hetsika fanadiovana faobe tanterahin’ireo ekipa teknika iraisan’ny Boriboritany Fahatelo sy ny Boriborintany Fahadimy. Niara-nisalahy nanatanteraka izany tamin’ny faran’ny herinandro teo teny Ampasampito ireo mpivarotra « Friperie », mpivarotra anana sy mpivarotra enta-madinika manamorona
CUA-DDT EPP Boriborintany Fahatelo
Sekoly EPP 3 tao anivon’ny Boriboritany Fahatelo: EPP Ankadifotsy I, Ankadifotsy II ary Behoririka no namendrahan’ny BMH ranom-panafody famonoana moka sy bibikely mpitondra otrik’aretina samihafa, androany tolakandro. Efitrano fianarana 23 miampy ireo toeram-pivoahana, ireo
CUA: Asa famendrahana ody moka sy bibikely (EPP sy FOKONTANY)
auteur septambra 15, 2016 Commentaires fermés
Hamendrahana ranom-panafody hiadiana amin’ny moka sy bibikely samihafa avokoa ireo Sekoly EPP rehetra manerana ny boriborintany enina, hatramin’ny 30 septambra 2016. Mifanaraka amin’ny vinan’ny Ben’ny Tanànan’Antananarivo Lalao Ravalomanana ny tanjon’ny hetsika: Mpianatra sy Mpanabe
CUA: Asa famonoana Moka – Boriborintany Fahadimy
auteur septambra 9, 2016 Commentaires fermés
Mitohy hatrany ny asa famendrahana fanafody iadiana amin’ny moka sy karazana bibikely tanterahin’ny Kaominina Antananarivo-Renivohitra. Ny fokontanin’Anjanahary IIS sy Manjakaray IIC no nisantarana izany androany maraina, ho an’ny Boriborintany Fahadimy. Amin’ny alarobia 14 septambra
CUA: Hetsika fanondrahana odimoka sy bibikely – Boriborintany I
auteur septambra 1, 2016 Commentaires fermés
Mitohy hatrany ny hetsika «FAMONOANA MOKA» karakarain’ny Kaominina Antananarivo-Renivohitra. Teny amin’ny Fokontany Ambodifilao-Ambondrona indray no nanombohana ny asa ho an’ny Boriboritany Voalohany, rehefa tontosa ny teny amin’ny Boriborintany Fahaefatra. Ranom-panafody eo amin’ny 50 litatra
Boriborintany faha-IV: Hetsika fanondrahana odimoka sy bibikely
auteur aogositra 31, 2016 Commentaires fermés
Ny Fokontany Ankaditoho-Marohoho sy ny Fokontany Anosimahavelona no namaranana ny hetsika «FAMONOANA MOKA» karakarain’ny Kaominina Antananarivo-Renivohitra tao anivon’ny Boriborintany Fahaefatra, ny talata 30 aogositra, hetsika natomboka ny alakamisy 25 aogositra teo. Fokontany maro no